Home Wararka Qoraalka loo tiiriyey Alshabaab Uma Eka Qoraalladoodii ee Villada ayaa ka dhex...
Qoraalka loo tiiriyey Alshabaab Uma Eka Qoraalladoodii ee Villada ayaa ka dhex muuqata.
Al-Shabaab weligood kuma qorin lugadda Inigrisiga bayaannadooda oo waxay u arkaan af gaalaad, waana la heli karaa dhammaantood qoraalladooda luqadda Carabiga iyo Somaliga ayey ku soo bandhigi jireen.
Haddaba halkaas waxaa ka dhalanaya:
Maxaa keenay in hadda ay ku soo qoraan luqadda Ingirisiga bayaankooda.
Ingirisiga ku qoran maaha mid u qoran siiqadda ay Al-Shabaab wax u qorto ee waa mid ka horumarsan.
Marka si fiican loo eego qoraalkan waxaa ka muuqda in aan la tarjumin ee lagu qoray luqadda Ingirisiga taas oo ay ka dhex muuqdaan faraha Madaxdtooyada Somaliya iyo la taliyayaasheeda kadibna loo email gareeyey Al shabaab oo lagu yiri ku soo saara waraaqda calaamadiinna leh, kana soo qeybiyey dhankiinna.
Tani waxay muujineysaa in hawlaha dhacay dhammaan la isla fuliyey shabaab iyo Villa Somaliya, taas oo dadka nabadgalaya iyo wax ka yaqaanna ay sheegayaan inaysan xisaabta sidan isku xeryeyn.
Dadka yaqaanna marina Gate iyo sida adage e lagu tago waxay shaki badan gelinayaan in aanu shabaab caadi ah ka gudbi Karin afarta bar kontarool ee talla qof la wado oo amar xagga sare ka yimid lagu sii daayo maahee, kaas oo la leeyahay waxaa uu ka yimid la taliyaha Farmajo ee Ammaanka Mudanae Xildhibaan Fahad Yasiin Xaaji Dahir oo ragga amray in la sii daayo.
Sidoo kale, xera lama galaay ( prohibited camp) waa meel aysan geli Karin cid aan loo fasaxin, qofkasata ee halkaas galayaa waa la ogyahay waxa uu yahay iyo waxa uu u socda waayo waxaa halkaas jooga ciidan kii Fahad uu geeyey oo uu uga soo tagay laguna yiri MW Hirshabeelle ammaanka ayey kuu sugayaan.
Dhinaca kale Xil. Amina Maxamed Cabdi ahn waxay degeneyd Madaxdtooyada H/Shabeelle, cidda dishay iyo cidda soo fasaxday iyo fududeysay waxay amarka ka wada qaataan Abuu Camaar sida aan xogaha qarsoon sheegayaan.
Haddaba shaki ma leh laba shabaab inay wada shaqeeyaan. Cid kasta waxaa u cad in Villa Somaliya iyo shabaab ay wada shaqeeyaan waxaana a hubaa haddii doorashada u dhici weydo sida ay Fahad iyo Farmajo rabaan in xildhibaanno badan la layn doono, kuwana la af duubi doono, odayaashii iyo ergadiinna la dhibaanteyn doono. Si taas looga badbaado waa in:
In saaxiibada Soomaliya ee Beesha Caalamka ay si degdeg u taageraan hay’adda kaliya ee sharciyadda haysata ee uu hogaamiyo RW Rooble, kuna dheerigeliyaan inuu qaato go’aan kasta oo uu ku xasilin karo nabadda dalka, gaar ahaan caasimadda iyo dhamistirka doorashooyinka gabagabada ah.
In Xil. Amina Maxamed Cabdi loo xeraa qoyskeedana la siiyaa kursiga dahabka ah ee ay dhiiggeeda u bixisay, calanka buluugga ahna lagu duubay.
In Farmajo iyo Fahad laga saaro Villa Somaliya loona diido inuu Farmajo tartamo, si tartanku caddaalad u noqdo, Fahadna laga xayuubiyo xildhibaanimada.
In aqalka Sare iyo kan hoosaba dhakhso loo dhaariyo lana guda galo doorashada guddoonkooda, kaas oo la soo hormarinayo aqalka sare kadibna uu isaga qabto doorashada guddoonka Golaha shacbiga si furan oo caddaalad ah.
Haddii kale dalkaan wuxuu galayaa dagaal sokeeye waayo Farmajo iyo Fahad waxaa ka go’an:
In Farmajo uu boobo doorashada madaxweynenimada.
Haddii ay taas dhiciweyso inuu abuuro dagaal sokeeye.
Previous article(Xog) Sarifashadii Rooble ee dacwadii Ikram Tahliil iyo dilkii Xil. Aamino, maxaa ka dhaxayn kara?
Next articleDeeqdii Imaaraadka ugu deeqay abaaraha oo lagu iibinayo suuqyada Muqdisho
Kooxda Akhwaanu Muslimiin (Al Islah) oo ka soo muuqatay Masraxa siyaasadda...